किन लगभग हरेक हप्ता केही मालिकको के अरूको प्रशंसा हालन अन्तर्गत नयाँ लुगा देखाउन?! र अरूलाई समय वा "सिलाई" को नाम अन्तर्गत "खराब काम" फेंक धेरै सरल सानो कुरा को निर्माण को लागि पनि खर्च गर्न छ?! यो कुरा यहाँ मुख्य ढाँचा, तपाईं कति छिटो एक पोशाक, शर्ट वा प्यान्ट सी सक्दैन छ। काटन न्यूनतम समय लाग्छ भने, आंकडा मा उतरने मा थप recesses आवश्यकता छैन र कडाई प्रमाणित Folds, त्यसपछि पोशाक सिर्जना केही घण्टा अधिकतम लाग्छ।
हाउते Couture पोशाक
पनि सबैभन्दा चिरपरिचित शैलीहरू र silhouettes अक्सर सरल कट छन्। यी मध्ये एक साँच्चै Starry पोशाक, पहिलो तस्वीर चित्र मा छ। यो सांसारिक दल Kerri Andervud र विटने पोर्ट मा sported। तर साँझ गाउन रूपमा पोशाक इच्छुक सी? छिटो - Flared टोपी आस्तीन सबै भन्दा सरल र सिलाई को एक को यो कृति को ढाँचा बनाउन। तसर्थ, हामी थाल्छन्।
कामको लागि आवश्यक: को खण्ड मनपर्ने शर्ट आस्तीन वा पोशाक बुनाई, चौडाइ मा सेतो मटर आधा मीटर र लम्बाइमा 1.8 मीटर संग काले कपडा बुन्नु। टी-शर्ट संख्या मा एक राम्रो फिट हुनुपर्छ। तपाईं बौछार छैन कि एक सामाग्री चयन भने, तपाईं उत्पादन र आस्तीन को किनाराको प्रशोधन गर्न समय खर्च गर्न सक्दैन।
अर्को, नमुना गर्न अगाडि बढ्नुहोस्। चार तहहरू मा खण्ड, भित्री बाहिरी पक्ष गुना। नमुना आधार पूर्व-ढिलाइ बुना संख्या मा राम्रो बस्छन जो टी-शर्ट छ। माइक पनि आधा जोडेको र पिन बन्द काट्नु गर्न आवश्यक छ। अब, यो कपडा गुना र अपरूपण एउटा टी-शर्ट राख्दै। शर्ट को किनारा बाट2सेन्टीमिटरको दूरी मा चक पक्ष सिउनी लाइन कोर्नुहोस्। त्यसपछि ढाँचा आस्तीन प्रदर्शन। पहिलो suture लाइन टि-शर्ट कपडा मा स्थित आस्तीन देखि2सेन्टीमिटरको दूरी छ भने, स्लिभ किनारा देखि 25 सेमी को दूरी, बिस्तारै 25 सेमी यसको चौडाइ वृद्धि flared हुनुपर्छ। यो पोशाक तल भाग हल्कासित मिलान गर्छ।
अब, एक मुख आकर्षित। हामी तखता वी आकारको cutout 15 सेमी लामो र 12 सेमी चौडा मा प्रदर्शन, र पछिल्लो डुङ्गा, सामूहिक कटौती बनाउन। दुई पक्ष seams Sews। ह्यान्डल आस्तीन, घाँटी र उत्पादन को तल। नयाँ साँझ पोशाक तयार छ। के र कसरी चाँडै एक पोशाक बनाउन विचार छैन। बस बुना कपडा लिन र एक रात मा एक उत्कृष्ट नमूना बनाउन।
Flared स्लिभ नमुना मा एक-टुक्रा तपाईं शैलीहरू र मोडेल को एक किसिम सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। यी मोडेल उत्पादन, सामाग्री र रोपण को लम्बाइ भिन्न। तपाईं दृढ conversely, अधिक मुक्त संख्या बसिरहेका वा, नयाँ कुरा बनाउन सक्छ। raskraivanii पक्ष सिउनी मा अघिल्लो मोडेल को ढाँचा t-शर्ट देखि4सेन्टीमिटरको दूरी मा पकड र थप बाक्लो कपडा प्राप्त गर्न भने, यो उत्पादन को सामान्य छाँयामा र उपस्थिति को लागि पूर्ण बिभिन्न बाहिर बारी हुनेछ। एक साना-टुक्रा स्लिभ निकै न्यानो मौसम लागि पोशाक को tailoring सरल। साँच्चै, एक गर्मी पोशाक कसरी छिटो र सजिलै गर्न को प्रश्न को गर्मी मा, यो विशेष सान्दर्भिक छ।
सुन्दर र स्टाइलिश बेल पोशाक मिनी कुनै पनि पार्टी को एक वास्तविक हाइलाइट र अद्वितीय Maxi परिष्कृत उत्सव लागि उपयुक्त हुनेछ। धेरै साथीहरू जस्तै पोशाक हात सिलना थियो भन्ने विश्वास गर्छन् छैन। यहाँ चाँडै बेल कपडा पोशाक सी कसरी विस्तृत निर्देशनहरू छन्।
यस्तो अघिल्लो एक समान पोशाक काटन को सिद्धान्त। काम आवश्यक बेल चौडाइ आधा मिटर र 1.40 मिटर मिनी को एक लम्बाइ लागि। Maxi आवश्यक लागि तल लाइन गर्न काँध सिउनी देखि दूरी मापन गर्न। काटन लम्बाइ दुई यस्तो लम्बाईहरू हुनेछ।
लागि आधारमा प्रतिमान हामी लिन त्यही टी-शर्ट र त्यसपछि माथि थप्न र आधा उनको सुई बन्द काट्नु। अर्को, हामी माथि कपडा नयाँ पोशाक लागि चार पटक थप गर्नुहोस्। पिन अप टी-शर्ट। अब चम्कने बस्तु को तल टी-बनाउने किनारा देखि4सेन्टीमिटरको दूरी मा छेउमा सिउनी लाइन समातेर। Kroim स्लिभ। यो गर्न, हामी सीट आस्तीन शर्ट को अन्त चिनो, 35 सेन्टीमिटरको दूरी लम्ब तल पकड। अब armhole यसलाई जडान गर्नुहोस्। डुङ्गा को रूप मा घाँटी प्रदर्शन र ढाँचा कटौती। यो शैली एक पोशाक कति चाँडो सी? तपाईं मात्र केही 5-10 मिनेट tailoring जानेछन्। सबै पछि, तपाईं मात्र2पक्ष सिउनी बनाउन आवश्यक छ। अधिकांश समय काटन र तल र स्लिभ उत्पादनहरु को आंकडा डिजाइन मा खर्च भएको छ।
कसरी आफ्नो हातमा ढाँचा गर्मी स्कर्ट सिर्जना गर्न
ढाँचा गर्मी भन्दा माथि: आफ्नै हातले तस्बिरहरू दर्जनौँ
गम को मोती संग कंगन कसरी बुनाई गर्न?
सम्पत्ति कर को प्राप्ति: लेखांकन मा पोस्टिंग
को Kandalaksha खाडी कहाँ छ? वर्णन, सुविधाहरू, फोटो
पम्प परिसंचरण: सेट मूल्यहरु, समीक्षा, चयन
बच्चाहरु को लागि kenguryatnik छनौट
Fibrates - यो के हो? को संरचना, प्रयोग, contraindications
नाम को अर्थ: Vita - प्रकृति र भाग्य